Loratadine (လိုရတဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Loratadine (လိုရတဒင်း)
Loratadine (လိုရတဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Loratadine (လိုရတဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Loratadine (လိုရတဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Loratadine ဟာ histamine ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီး hay fever ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေကြောင့် ခံစားရနိုင်တဲ့ ယားယံခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊မျက်ရည်များထွက်ခြင်း နဲ့ နှာချေဆတ်ခြင်းတို့ကို ကုသဖို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အင်ပြင်အဖုအပိန့်တွေကြောင့် ယားယံခြင်းကို ကုသပေးဖို့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Loratadine ဟာ အင်ပြင်ထွက်ခြင်းကို မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ဝေဒနာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ခြင်း/ကုသခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေကို ကုသရာမှာ epinephrineသုံးစွဲဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားရင် epinephrine ဆေးထိုးကိရိယာကို သွားလေရာ ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး epinephrine အစား loratadine ကို အသုံးမပြုရပါဘူး။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ Loratadine ကို မိမိဖာသာ အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားထားတဲ့ အခြေအနေတွေကလွဲလို့ Loratadine ကို အသက်၆နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုရပါဘူး။ ဝါးစားနိုင်တဲ့ ဆေးပြားတွေကို (ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ) အသက်၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုရပါဘူး။
Loratadine (လိုရတဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ Loratadine ကို မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်ခင်မှာ အညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုရပါမယ်။ တကယ်လို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ သောက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်တွေကို အတိအကျလိုက်နာရပါမယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ မရှင်းလင်းတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။Loratadine ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ တနေ့ကို တကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ဝါးစားနိုင်တဲ့ ဆေးပြားပုံစံကို သုံးစွဲတယ်ဆိုရင် ဆေးပြားကို ကျေညက်စွာ ဝါးစားပြီးမှ မြိုချရပါမယ်။ သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏဟာ သင့်အသက်အရွယ်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နဲ့ ဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုတို့အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလထက် ဆေးကိုပိုသောက်ခြင်း မပြုရပါဘူး။
ဆေးသောက်ပြီး သုံးရက်လောက်ကြာတဲ့အထိ ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေ မသက်သာရင် ဒါမှမဟုတ် ရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်ထက်ပိုပြီး အင်ပြင်တွေ ဆက်လက်ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမယ်။ သင့်ရောဂါအခြေအနေ ပိုဆိုးလာရင် ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် (ဥပမာ ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင်) အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူရပါမယ်။
Loratadine (လိုရတဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Loratadine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ loratadine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ loratadine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Loratadine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Loratadine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Loratadine (လိုရတဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
loratadine ကို မသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
loratadine သို့မဟုတ် loratadine ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပါ။
သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ သို့မဟုတ် သုံးစွဲဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ loratadine၊ဗီတာမင်အားဆေးတွေ၊အာဟာရဖြည့်စွက်အားဆေးတွေ နဲ့ သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ အအေးမိခြင်းနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေအတွက် သုံးစွဲနေတဲ့ loratadine အမျိုးအစားကို ပြောပြဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိခြင်း၊အသည်း ဒါမှမဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိခြင်း။
သင့်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေခြင်း။ loratadine ကို သုံးစွဲနေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့ရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမယ်။
phenylketonuria ရောဂါရှိခြင်း (ဒီရောဂါဟာ မွေးရာပါရောဂါတမျိုးဖြစ်ပြီး ဉာဏ်ရည်ချို့တဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ အစားအသောက်ပုံစံနဲ့ ကျွေးမွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)။ သောက်ဆေးပြားတံဆိပ်အချို့မှာ aspartame ပါဝင်လာနိုင်ပြီး အဆိုပါ aspartame ကနေ phenylalanine အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Loratadine (လိုရတဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Loratadine (လိုရတဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ (ဥပမာ အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ၊လည်ချောင်းစသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်းစသည်) ကို ခံစားလာရပြီဆိုရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူရပါမယ်။ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊မမှန်ခြင်း၊မေ့လဲသွားတော့မယောင် ခံစားရခြင်း၊အသားဝါခြင်း၊တက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးရပါမယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ဗိုက်နာဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊အာခြောက်ခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊အသံရှတတဖြစ်ခြင်း၊မျက်စိနီရဲခြင်း၊အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊အရေပြားတွင် အနီစက်များထွက်ခြင်း အစရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Loratadine (လိုရတဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Loratadine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Loratadine ဟာ desloratadine နဲ့အလွန်ဆင်တူတဲ့အတွက် loratadine အသုံးပြုနေစဉ်ကာလမှာ desloratadine ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေကို မသုံးစွဲရပါဘူး။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Loratadine (လိုရတဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Loratadine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Loratadine (လိုရတဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Loratadine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အမှတ်နှစ်အမျိုးအစား ဆီးချိုရောဂါ (ဒီဆေးမှာပါဝင်လာတဲ့ နှာခေါင်းပိတ်သက်သာစေသော ဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေကို နှလုံးနဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေ ရရှိစေဖို့ အခွင့်အလမ်းများစေပါတယ်)။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ဆီးသွားရခက်ခြင်း (histamines ဆန့်ကျင်ဆေးတွေရဲ့ အချို့သော ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်)။
ရေတိမ်ရောဂါ (မျက်စိတွင်းဖိအားကို အနည်းငယ် မြင့်တက်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်)။
နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် သွေးကြောရောဂါများ။
သွေးတိုးရောဂါ (ဒီဆေးမှာပါဝင်လာတဲ့ နှာခေါင်းပိတ်သက်သာစေသော ဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကို တက်စေပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြန်စေပါတယ်)။
ကျောက်ကပ်ရောဂါ (သွေးထဲမှာ loratadine ပမာဏများပြားလာစေနိုင်တဲ့အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် loratadine ရဲ့ ပမာဏကို လျှော့ချသင့်ပါတယ်)။
အသည်းရောဂါ (သွေးထဲမှာ loratadine ပမာဏများပြားလာစေနိုင်တဲ့အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာစေပါတယ်)။
သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်း (သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် နဂိုကတည်းက မြန်နေတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ဒီဆေးမှာပါဝင်လာတဲ့ နှာခေါင်းပိတ်သက်သာစေသော ဓါတ်ပစ္စည်းတွေက ပိုလို့တိုးပြီး ခုန်စေပါတယ်)။
ဆီးကျန်ခြင်း (pseudoephedrine သုံးစွဲရင် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်)။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Loratadine (လိုရတဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နှာရည်ယို၊နှာပိတ်ခြင်းများအတွက် : ၁၀ မီလီဂရမ်ပမာဏဖြင့် တနေ့တကြိမ် သောက်ရပါမယ်။
အင်ပြင်ထွက်ခြင်းအတွက် : ၁၀ မီလီဂရမ်ပမာဏဖြင့် တနေ့တကြိမ် သောက်ရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Loratadine (လိုရတဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အတွင်း ကလေးများ : ၅မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင်တကြိမ် သောက်ရပါမယ် (ဆေးရည်ပုံစံ)။
အသက် ၆နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများ : ၁၀ မီလီဂရမ်ပမာဏဖြင့် တနေ့တကြိမ် သောက်ရပါမယ် (ဆေးပြား၊ဆေးတောင့်၊ဝါးစားနိုင်သော ဆေးပြားပုံစံ)။
Loratadine (လိုရတဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
loratadine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား ၁၀ မီလီဂရမ်။
Loratadine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
What Is Loratadine (Claritin)?. http://www.everydayhealth.com/drugs/loratadine.
Accessed June 26, 2016.